Maraykanka oo ka digey ammaanka garoomada diyaaradaha ee dalka Kenya?? | Awdal State News Network
Home » DAILY AWDAL STATE NEWS » Maraykanka oo ka digey ammaanka garoomada diyaaradaha ee dalka Kenya??
Maraykanka oo ka digey ammaanka garoomada diyaaradaha ee dalka Kenya??
Talaado, July 22, 2014-Boramacity.com — Hay’adda maamusha duulimaadyada madaniga ah ee Maraykanka (FAA) ayaa dalka Kenya ku dartay liiska dalalka halista ah ee shirkadaha duulimaadka Maraykanku aanay ka shaqeyn karin.
Dalka Itoobiya ayaa sidoo kale qayb ka ah dalalka laga digey iyadoo Soomaaliyana uu weli safka hore kaga jiro wadamada aysan suuragalka ahayn in diyaaradaha madaniga ah ee Maraykanku ay caga dhigtaan.
Dowladda Kenya ayaa isku dayday inay ku qanciso Maraykanka in aysan jirin wax khatar ah oo soo wajihi karta diyaaradaha kusoo degaya gegida diyaaradaha ee Jomo Kenyatta iyo garoomada kale.
Asbuucii lasoo dhaafay oo qura waxaa qalab casri ah oo u badan nooca wax lagu baaro lagu rakibay garoomada Kenya si loo xaqiijiyo ammaanka loogana hortago khatar kasta oo ay suurogal tahay inay timaado.
Garoonka caalamiga ah ee Jomo Kenyatta oo ah kan ugu weyn dalka Kenya, waxaa todobaad kasta ka bixi jirey tobannaan duulimaad oo si toos ah ugu jeeda dalka Maraykanka.
Ammaanka dalka Kenya ayaa soo xumaanayey laga soo bilaabo bishii October sannadkii 2011, markaas oo cutubyo ka tirsan militeriga Kenya ay usoo tallaabeen dhinaca Soomaaliya, si ay ula dagaallamaan Al-shabaab, oo Kenya ay sheegtay inay khatar ku yihiin dhaqaalaheeda iyo weliba ammaanka muwaadiniinteeda.
Weerarkii ugu weynaa uguna khasaaraha badnaa ee tan iyo sanadkii 2011 Kenya ka dhacaa wuxuu ahaa kii lagu qaaday xaruntii laga dukaameysan jirey ee Westgate Mall bishii September ee sanadkii hore 2013. Weerarkaas oo 67 qof ay ku dhinteen tiro kale oo intaas ka badanina ay ku dhaawacmeen, waxaa mas’uuliyaddiisa sheegtay Ururka Al-shabaab.
Xigasho: Standard Digital